Buy …ရေချိုးတဘက်လေး (3,900Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Tin Zar Et
Wow……ရေချိုးတဘက်လေးတွေ(3900 ks)ဈးကျသွားပြီနော်။တဘက်သားလေးတွေကလဲနုဖတ်နေတာပဲ။ (8000-5000)ကြားတုန်းကမမှာရသေးတဲ့ သူတွေခုအမြန်မှာလိုက်တော့နော်(3900 ks)နဲ့ ပဲရောင်းပေးတော့မှာနော်။
ဒီနေ့ ထိ အထည်ရေအတွက် (1000) ကျော်
ရောင်းချ ပေးခဲ့ ပြီးပါပြီ။
ဈေးကအရမ်းတန်နေလို့့Size သေးနေမလား ?? အသားမကောင်းဘူးလား ???ဆိုပြီးလုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့ နော်
size ကြီး/ တဘက်သားကလဲနုဖတ်နေတာပဲ……အမြတ်နည်းနည်းပဲယူပြီးလက်ကားဈေးအတိုင်းရောင်းပေးတာမို့ လို့ ဒီဈေးနဲ့ ရတာပါ။
cb ( or ) message box မှမှာ
#Contacts - 09790157140 ( viber ) , 09964049620
အမည်: …ရေချိုးတဘက်လေး